Fifehezan-tena… hahafehezana ny valanaretina | NewsMada
Fifehezan-tena… hahafehezana ny valanaretina
Par Taratra sur 31/07/2020
Voafehy sa tsia ny fihanaky ny valanaretina Covid-19? Resaka tian-kateza izay, raha izao mbola ao anatin’ny ady izao. Tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Conoravirus. Hatramin’izao, ny faritra Analamanga no tena ahitana izany maro. Miara-dalana amin’izany ny fisian’ny marary ao anatin’ny fahasarotana, ny namoy aina…
Na izany aza, tsy misy atao mankaleo, mandreraka, mahakivy. Mitombo isa ny marary sitrana, mahomby ny fampiasana ny fanefitra sy ny fitsaboana. Matoa efa somary novahana kely, ohatra, ny fihibohana amin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao: efa misy fihatsarany ny vokatry ny ady, na mafy sy sarotra aza. Tsy inona fa noho ny ataon’ny tsirairay… miaraka.
Ao anatin’izany ny fanajana sy fampiharana manontolo sy amin’ny antsipiriany ny fepetra fisorohana na fitsaboana. Ny fifehezan-tena no hahafehezana sy hifehezana ny valaretina tsy hihanaka, ho resy tosika. Tsy misy fahagagana na kisendrasen­dra izany, mitaky ezaka, finiavana, firaisankina, fifampitokisana, faharetana… Mila vitaina izay efa natomboka.
Nefa mbola misy ihany no manontany tena hoe: inona, hono, no ataon’ny fitondrana fa tsy voafehy ny raharaha? Na tsy mahomby ny paikady… Tonga hatramin’ny hoe tsy mahomby ny fanjakana, ka… Aoka re e! Nefa handresena ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao ve, ohatra, ny fanakorontanana politika? Avadiky ny sasany ho aretina politika no atrehina amin’izao.
Tsy misy afa-tsy ny fifehezan-tena ihany no ady eo. Eo ny tsirairay mila manaraka ny fepetra rehetra amin’izany: na aiza na aiza, na iza na iza. Mila mifehy vava tsy hamindra ny fanako­ron­tanana, ohatra, ny mpanatsatso. Mba tsy hifindran’izany koa ny tompon’andraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Ady amin’ny valanaretina no atao izao, fa tsy ady vava na adilahy, sanatria.
“Ny tsy fahalalana, fa tsy ny fahalalana no mampiady ny olona sasany hanohitra ny hafa”, hoy ny sekretera jerelin’ny Firenena mikambana (ONU) teo aloha izay, i Kofi Annan.